Archive du 20190128
Ravalomanana sy ny K25 Ho avy masiaka amin’ny fifidianana
Vita ny zoma 25 janoary teo ny fifampiarahabana noho ny fahatrarana ny taona 2019 ho an’ny TIM.K25. Tsy mijanona hatreo anefa ny asan’ny K25 fa hitohy ny fandraisana anjara amin’ny fiainam-pirenena,
AKFM-Fanavaozana Mivonona amin’ny fifidianana rehetra
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny antoko AKFM-Fanavaozana. Araka ny fanapahan’ny antoko mialoha ny fifidianana,
Fanitsiana sy fikitihana lalàna Hangataka fahefana amin’ireo antenimiera ny filoha
Hiatriaka fivoriana tsy ara-potoana ireo antenimiera roa tonta araka ny fampiantsoana, tamin’ny alalan’ny didim-panjakana navoaka teo anivon’ny filankevitry ny minisitra notarihan’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, sy ny praiminisitra, Ntsay Christian, ny alakamisy lasa teo.
Hery Rajaonarimampianina “Miandry ny velirano natao ny vahoaka”
Tsy misy olon’ny HVM amin’ny ankapobeny ao anatin’ny governemanta vaovao.
Jean Ignace Randrianirina « Misy dikany ny tenin’ny vondrona eoropeanina. »
Samy manana ny fomba fijeriny ny firafitry ny governemanta Ntsay ankehitriny ireo mpanao politika.
Taratasin’i Jean Matoky anao izahay
Mbola hotohizako ihany ny fiarahabana anao ry Jean dieny tsaroako a ! Soa ihany fa tadidiko.
Fiaran’ny minisitra sy ny ekipany Tsy mahazo manao hitsin-dalana intsony
Ny zoma lasa teo dia niatrika ny fihaonana lehibe voalohany teo amin’ny governemanta sy ny mpikambana ao aminy na ny filankevitry ny minisitra.
Tontolon’ny fitsarana Miandrandra ady amin’ny kolikoly tena izy ny rehetra
Efa nisahana andraikitra maro teo anivon’ny fitsarana malagasy ny mpitsara vaovao, Jacques Randrianasolo, hoy ny mpahay lalàna Imbiky Herilaza.
Fanamboarana ny Rova Hijapy ny vitan-dRavalomanana Rajoelina
Nisy fotoam-pivavahana niombonan’ireo lohandohan’ny mpisorona eto amin’ny firenena notarihin’i Andry Rajoelina teny Anatirova omaly alahady 27 janoary.
Tsaho naely momba ny rano fisotro Nisavorovoro ny tao Toamasina
Hafalian’ny hafa tokoa ny fahorian’ny sasany raha ny zava-nisy tao Toamasina omaly alahady tamin’ny fanelezana tsaho tamin’ny fiantsoana tamin’ny finday,
Raharaha zaza tsy hita Ireo ankizy sy tanora mitsoaka no tena betsaka
Betsaka ireo ankizy sy tanora voaresaka nanaovana antso avo tamin’ny tambajotran-tserasera facebook tato ho ato fa tsy hita.
Voahangy Rajaonarimampianina Efa miadam-pinaritra any andafy ?
Anisan’ny nizaka kiana maro teto amin’ny firenena Rtoa Voahangy Rajaonarimampianina vadin’ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina.
Z’T MAMOR Hiasa ho an’i Mahitsy RN 4 indray
Tao anatin’ny fivoriana nataon’ny Z’T MAMOR “Zanaky ny Teraky ny Manendy eny Moriandro Anosivola Mahitsy”natao teny amin’ny tranompokonolon’i Mahitsy omaly alahady 27 janoary 2019 no nanambaran’ny filohany, Me Maminiaina Jhonny Rakotondranaly,
Fandraharahana ara-toekarena Ilaina ny traikefan’ny vahiny
Hiditra amin’ny edisiona fahefatra amin’ny hetsika ASIA-ENJOY indray ny mpikarakara, dia ny agence Première Ligne, amin’ny 30 martsa ho avy izao.
NANAMBITAMBY NY FIANGONANA
Na dia nanamafy aza fa tsy hanafangaro ny fivavahana sy ny fitantanana ny firenena ny filoha Andry Rajoelina dia mbola nanambitamby ny fiangonana ihany ka nanatrika fotoampivavahana.
Rano maloto eny Itaosy Cité Efa nosoloin’ny JIRAMA avokoa ireo fantsona
Teknolojia vaovao Tena mbola tara i Madagasikara
Tsy azo ihodivirana intsony ny fironana anatin’ny tontolon’ny informatika sy ny teknolojia vaovao.
Fondation MohamedVI des Oulema Africains Tafatsangana eto Madagasikara ny rantsany
Hanampy ireo manampahaizana tafatsangana amim-pomba ofisialy eto amintsika ny “Association Fondation Mohamed VI des Oulema Africains” izay manana ny foibeny ao Antsirabe, tantanan’Atoa Farok Nomenjanahary Justin.